Ithuba eliyingqayizivele kohlola umoba
UNKSZ Ncebakazi Latsha othole ithuba eliyingqayizivele lokuthi abe yingxenye yabazothamela ingqungquthela ehlelwe yizikhungo zezemfundo ephakeme emhlabeni, i-International Business Conference, ngoSepthemba Isithombe: SITHUNYELWE
Phili Mjoli | June 3, 2021
OWESIFAZANE osemkhakheni wokukhiqizwa kukashukela, osanda kuthola iziqu zeMBA uzoba esengqungqutheleni yamabhizinisi ehlelwe ngamanyuvesi ahlukene emhlabeni, i-International Business Conference.
UNksz Ncebakazi Latsha (40) waseLusikisi, uqashwe wumkhandlu oqinisekisa ukuthi abalimi bakamoba bakhokhelwa imali, iSouth African Sugar Association (Sasa). Usebenza lapho kugaywa khona ushukela, eSezela Sugar Mill, eseMzinto. Njengamanje umatasatasa uhlela ucwaningo lwakhe ukuthi lube yingxenye yomqingo okuzobe kuboniswana ngawo kule ngqunguthela.
Umsebenzi wakhe wukuhlola umoba olethwa ngabalimi ukuthi unoshukela ongakanani, bese enza isiqiniseko sokuthi isigayo sikhokhela umlimi leyo imali efanele umkhiqizo wakhe.
Le ntokazi ithi ijabule kakhulu ngokuthi iphothule iMBA yayo e-UKZN ngeminyaka emibili kodwa osekuyenza ijabule kakhulu wukuthi ucwaningo lwayo luzofakwa emqingweni ozofundwa kuphinde kuboniswane ngawo engqungqutheleni.
UNksz Latsha uthe uqale kwaSasa ngo-2018 kwaqala intela yezikashukela .
"Intela kashukela ibingaqondene nemboni kashukela kodwa ukufakwa kwayo kuyithintile le mboni ngokuthi abakhiqizi beziphuzo behlise ushukela abawuthengayo, okuholele ekutheni kuze kuthinteke abalimi abasafufusa, laba uhulumeni athi uyabathuthukisa. Ucwaningo lwami belubheka ukuthi ngabe le ntela ibe namuphi umthelela embonini kashukela," kusho uNksz Latsha .
Uqhube wathi: " Kulolu cwaningo lwami kuvele ukuthi kushaywa umthetho wentela kashukela nje vele imboni kashukela ishayekile ngenxa yesomiso. Okunye engikutholile wukuthi ushukela okhiqizwe kuleli uyabiza ezitolo ngenxa yokuthi izindleko ziphezulu kodwa othengwe ngaphandle, osuke usemaphaketheni aziwa ngeNo Name ushibhile. Lokhu kwenza ukuthi amakhasimende athenge ushukela wangaphandle, ayeke okhiqizwe kuleli," kuchaza uNksz Latsha.
Uthe ngenxa yentela kashukela iNingizimu Afrika izithola isinoshukela omningi kunodingekayo, bese iwudayisa emazweni angaphandle ngemali encane ukuze ungalahlwa.
Ucwaningo lwakhe uthe luveze ukuthi akhona amasu uhulumeni anawo, iSugar Industry Master Plan 2030.
Phakathi kwamasu kahulumeni kukhona elokuthi abalimi bangabe besatshala umoba kuphela kodwa batshale nezinye izitshalo. Elinye ngelokuthi kwenziwe neminye imikhiqizo ngomoba, okungaba wukukhiqiza ugesi ne-Ethanol, okwenziwa ngayo utshwala.
"Ngokwalolu cwaningo abalimi abasathuthuka noma kungenziwa lokho ngeke bahlomule uma ungekho umthetho obavikelayo. Ukwenziwa kwemikhiqizo eminingi ngomoba nakho akubahlomulisi abalimi ngoba bakhokhelwa ngokuthi umoba wabo unoshukela ongakanani, kabazuzi lutho ngokunye okukhiqizwa ngohlanga olusuke selukhishwe ushukela, uma selwenziwa omunye umkhiqizo. Isu lokutshala izinto eziningi epulazini ngeke libasize nalo ngoba balima emhlabeni omncane futhi abanamali yokutshala ezinye izitshalo," kusho uNksz Latsha.
Isisombululo wukuthi abalimi abathuthukile bashenxe ekutshaleni umoba, batshale eminye imikhiqzo, umoba usale kubalimi abasathuthuka, kugwenywe nokuthenga nokudayisa ushukela emazweni ase-Europe. Kwehliswe inani likamoba otshalwayo, kungatshalwa umoba omningi ube ungadingeki.